भाषण ठोक्छन अतिथी भाग्छन आयोजकलाई हम्मे हम्मे — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, समचार → भाषण ठोक्छन अतिथी भाग्छन आयोजकलाई हम्मे हम्मे
भाषण ठोक्छन अतिथी भाग्छन आयोजकलाई हम्मे हम्मे
May 10, 2016१८४ पटक
बैसाख २८ । अधिकांश कार्यक्रमहरुमा कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा सहभागि भएका प्राय अतिथिहरु कर्यक्रम समापन हुँदा सम्म उठेर गइसकेका हुन्छन । मुख्य अतिथीले सम्बोधन गर्ने वेला सम्म अतिथी तथा सहभागी दर्शक कार्यक्रम स्थलमा नभएपछि मुख्य अतिथी उत्साहहिन भएर बोल्न बाध्य हुन्छन भने आयोजकलाई कार्यक्रमको मर्यादा जोगाउन हम्मे हम्मे पर्छ । कार्य ब्यस्तताका कारण विदा लिनु परेको भन्दै अतिथीहरु ऋाफुले बोलेपछि कार्यक्रमबाट बाहिरिने गर्दछन तर उनिहरुको ब्यस्तता बजार वा चोकको चिया पसलमा बसेर गफ गर्ने मात्र रहेको पनि पाइएको छ । सम्मान ग्रहण गर्न कार्यक्रममा जाने मञ्चमा गएर आशन ग्रहण पनि गर्ने तथा मर्यादा क्रम अनुसार बोल्ने पालो नआउदै समय मागेर भाषण गर्ने अनि म हतारमा छु भन्दै कुलेलम ठोक्ने प्रवृतीले देवदह क्षेत्रको कार्यक्रमको संस्कृती नै बिथोलिएको छ । देवदह आर्दश बहुमुखि क्याम्पसका अध्यक्ष एवम समाजसेवी जिवलाल पराजुली भन्नुहुन्छ अज्ञानता एवम आफुलाई सर्वेसर्वाहा ठान्ने प्रवृतीको कारण यस्तो भएको हो ।
मलाई लाग्छ की राजनैतिक वा सामाजिक अगुवाले अर्कालाई सम्मान गर्ने प्रवृतीको बिकाश गर्नु पर्छ त्यो भएमा मात्र सार्वजनिक कार्यक्रम प्रति त्यसो त कहिले काहीँ कार्य ब्यस्तता अत्यन्त बढ्री भएका कारण यसरी कार्यक्रम स्थल बाट बाहिरिनु पर्ने पनि हुन्छ तर कार्यक्रमको मर्यादालाई नै बिर्सेर भाषण ठोकेपछि आफुलाई एकछिन पनि ढिला नहुने प्रवृतीले समाज प्रतिको दायित्वलाई भुत्ते सावित गराउँदछ । भाषणमा आर्दशका कुरा गर्ने तर ब्यवहारमा त्यसलाई प्रयोग नगर्ने मानवीय प्रवृतीका कारण पनि यस्तो समस्या उतपन्न भएको हो । नेकपा एमाले देवदहका अध्यक्ष विद्या लक्ष्मी गुरुङ्ग भन्नुहुन्छ समाजिक तथा राजनैतिक नेताले कार्यक्रममको महत्व नबुझ्दा यो खालको समस्या देखा परेको हो । त्यसैले कार्यक्रम आयोजकले सटिक र सक्षेपमा कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालन गर्न नसक्नु पनि यस खालको समस्याको कारणको रुपमा रहेको छ । अर्को तर्फ देवदहका अधिकांश सामाजिक अगुवाहरुमा पद र प्रतिस्ठा प्रतिको लालच पनि अत्याधिक छ । उनिहरु एक वा दुई संस्थामा मात्र नेत्रित्व लिएर सन्तुष्ट हुदैनन जसका कारण ति अगुवाहरुले जति वटा संस्थाको नेत्रित्व गर्न पाए पनि सहजै स्विकार गर्छन ।
त्यसरी धेरै संस्थामा नेत्रित्व गर्नेहरुले एकै ठाउँमा बसेर एउटै कार्यक्रमलाई मात्र समय दिन सक्दैनन । त्यही भएर अधिकांश कार्यक्रममा सहभागि हुने ति सामाजिक अगुवाहरु आफुले बोल्ने अनि टाप कस्ने गर्दछन । नेपाली काग्रेस देवदहका सभापती गुणाखर भुर्तेल भन्नुहुन्छ हामी राजनैतिक दलहरुले कामको जिम्मेवारीलाई बाडफाड गर्न नसक्दा त्यस्तो परिस्थीतीको सृजना भएको हो । एउटै मानिसले कहिले काँही एक दिनमा ५ वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु पर्छ । कार्यक्रममा सहभागि हुदा नै कार्यक्रमको प्रकृती के हो ? कति अवधीको हुन्छ ? भन्ने जस्ता सामान्य बिषयको ज्ञान लिएर कार्यक्रममा जाने हो भने अतिथीहरुले भगुवाको अभियोग खेप्नु पर्दैन । यहाका अधिकांश सामाजिक अगुवाहरुलाई कार्यक्रममा बोल्ने अनि कुलेलम ठोक्ने भन्ने अभियोग लाग्ने गरेको छ । त्यस्तो प्रवृतीलाई अन्त्य गर्न जरुरी देखिएको छ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी देवदहका इन्चार्ज ऋषिराम लामिछाने त्यस्तो पक्ष समाजको निम्ती खतरनाक भएको बताउनुहुन्छ । उहा भन्नुहुन्छ हामी भित्र रहेको अहंकारलाई हटाएर समाज प्रति जिम्मेवारी बोध गरेमा भाषण गर्ने र भाग्ने प्रवृतीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रम आयोजकले धेरै भन्दा धेरै अतिथीलाई आसन ग्रहण तथा बोल्ने समय दिएर सहानुभुती प्राप्त गर्न खोज्दछन । अतिथी बक्ताहरुले पनि बिषय प्रशंग बाहिरको लम्मेतान भाषण ठोकेर कार्यक्रमलाई बोझीलो बनाइदिन्छन । आयोजक र अतिथीको दुई वटा स्वार्थ गासिएर अधिकांश कार्यक्रमहरु रौनकहिन बन्न पुग्दछन । त्यसैले कार्यक्रम प्रति नै बितृष्णा पैदा नहोस भन्नका लागि राजनैतिक तथा सामाजिक अगुवाले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । आजको समयमा मानिसहरु असाध्यै ब्यस्त छन । उनिहरुको ब्यस्ततालाई ख्याल गरेर छोटो र सटिक कार्यक्रमको आयोजना गरेमा कार्यक्रम स्थल अतिथी र दर्शक बिहिन बन्ने छैन । यस प्रति सबैको ध्यान जानु आवश्यक भएको देवदह साप्ताहिकमा खबर छ ।